Misionera / vita ny 119 kaominina . – FJKM
Nahavita namangy Kaominina 119 sahady.
Nanomboka tamin’ny volana Novambra 2017 no niantafika tamin’ireo Kaominina maro manerana ny Nosy ny misionera FJKM nahavita fiofanana tamin’ny SEMI na ny Sekoly Misionera. Misy ny efa niverina avy niantafika, ao ny mbola any an-toerana ary ao ny eo am-pikarakarana ny fiaingana.
Araka ny tatitra voaray dia Kaominina 119 no efa vita sahady hatreto ka samy nananganana vondron’olona mpiara-mivavaka avokoa, satria izany rahateo no iraka ampanaovina ireo misionera. Miisa 2 hatramin’ny 6 ny misionera mitory isaky ny kaominina, ary vondron’olona mpiara-mivavaka amin’ny toerana 2 hatramin’ny 6 eo koa no voatsangana arakaraky ny fidadasiky ny kaominina tsirairay.
Vatsiana Baiboly sy Perikopa ary Mofonaina izy ireo amin’izany hahafahany manohy ny fiaraha-mivavaka aorian’ny fodian’ny misionera. Ny Synodamparitany any an-toerana kosa no miandraikitra ny asa fanohizana hahatonga ny vondron’olona mpiara-mivavaka ho lasa Fiangonana mijoro.
Tanjon’izao asa misiona izao ny hamita Kaominina 200 amin’ny volana Aprily 2018, hoy Atoa ROBERT SAONINA Marson Mpitandrina, Mpanampin’ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana. Araka izany dia nohavaozina ny lisitra mirakitra ny fitsinjarana ireo misionera handeha amin’ireo Kaominina sisa tavela.
Miisa 1365 ny misionera rehetra navoaka hatramin’izay avy teto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, ary Taolagnaro. Amin’ny ankapobeny dia ny antsasak’izy ireo no mpandeha fa ny ambiny kosa dia misionera mpandefa, izany hoe manohana am-bavaka sy ara-pitaovana. Raha ho an’ny misionera avy eto Antananarivo Renivohitra sy ny Manodidina ohatra dia 515 amin’ireo 902 no mandeha.
Ny Fiangonana manontolo no entanina hitrotro am-bavaka sy hanohana azy ireny izay misedra olana samihafa toy ny tsi-fandriampahalemana, ny faharatsian’ny làlana, ny dia an-tongotra lavitra, sns…
Mitohy hatrany ny asa famontosana Filazantsara ny Nosy koa entanina hatrany ny kristiana hanolo-tena sy hanaraka ny fiofanana ao amin’ny IFAMI na ny Ivotoerana Fanomanana Misionera (SEMI teo aloha) araka izao tetikandro 2018 izao :
Mahajanga 27 febroary – 03 martsa,
Moramanga 16-17 martsa,
Antsiranana 21-23 martsa,
Taolagnaro 04-05 aprily,
Toliara 30 aprily – 01 may,
Ambalavao 22-24 may,
Fianarantsoa 15 jona.
Niry Rakoto, Santatra Fahazavana